Mayelana NATHI - Dongguan City Baby Furniture Co., Ltd.
I-Dongguan City Baby Furniture Co, Ltd. yasungulwa eDongguan ngo-2007, kwathi ngemuva kwalokho iDongguan City BaoFa Furniture Co., Ltd. kanye neDongguan Pinweitongju Furniture Co., Ltd.zinkampani ezihlobene ngaphansi kokuphathwa okufanayo. Izinkampani zethu zeqembu zigxile ekwakheni nasekukhiqizeni ifenisha yezingane ephakanyisiwe nefenisha yezilwane ezifuywayo, ezinjenge-Kids Sofa, izihlalo zezingane, imibhede yezingane, ama-Ottoman, amasethi osofa abasenkulisa, izingane zombhede kanye nezibhedi zezilwane, imibhede yensimbi ... ect.
Sakhe izikhungo zokukhiqiza zesimanje ezimbili ezinama-20000 sqm, kanye neqembu elihle kakhulu le-R & D nabasebenzi abanekhono abangaphezu kuka-300 eDongguan, eChina.
Sakha umnyango wekhwalithi ngokwe-ISO9001 ngayinye: 2015, equkethe ukuqinisekiswa kwekhwalithi, ukuhlolwa kwekhwalithi, i-QE, i-IQC, i-IPQC, i-FQC ne-OQC. Isitifiketi sokuhlolwa kwefekthri siyatholakala nge: SMETA, ICTI, WCA, GSV, SQP… njll. Ikakhulukazi, siyimboni yokuqala enikeze ilayisensi yokukhiqiza yeDisney yefenisha yezingane ephakanyisiwe ne-OEM yalolu hlobo olukhulu eminyakeni engaphezu kwengu-9 kuze kube manje. Siyaziqhenya nangokuba umphakeli wezinkampani ze-TJX, iMelissa & Doug, Aldi, Dunelm, Jollyroom ... ect. Khonamanjalo inkampani yethu isidlulise iWalmart Audit futhi yanikeza umazisi weWalmart ID.
Sinikeza i-OEM ne-ODM nensizakalo eyenziwe ngokwezifiso, mahhala ngemikhiqizo yethu "KOOPO" "KOPOO KING" "BABYLAND" yemakethe yasekhaya neyangaphandle. Zonke izinhlobo zivumelana nezitifiketi ze-TSCA, EN71, ASTM, FSC, CPSIA ... ect.
Inkampani yethu izinikele ekuthuthukiseni imikhiqizo emisha ngomqondo wakamuva wokuklama kanye nobuchwepheshe obusha, ilwela ukunikeza abantu umkhiqizo omuhle ngamanani akhokhelekayo, ukuletha Izingane Nezilwane indlela yokuphila enempilo, futhi ijabule kakhulu ekhaya lakho.
Uyemukelwa ukuvakashela imboni yethu noma usishayele nganoma yisiphi isikhathi!